Basaastoota wayyaaneerra of eeggadhaa -
Basaastoota wayyaaneerra of eeggadhaa
BAAYYEE WAAN NAMA GADDISIISU Mucaan suurrishee armaan gadii kun SHUGER GOLOLCHA barattuu universiitii saayinsiif teekinolojii Adaamaa muummee Afaan oromoo waggaa 3ffa ti.
Isheen baasaastuu lukkeelee wayyaanee miseensa dhaaba OPDO jedhamuuti. Kaleessa gagala jechuun caamsaa 5/2014 TVO dhaan akka dubbattee sookkeettii nutti sakka’ametu jiramalee dhimmi maaltu nu jeeqsisa ykn deeggaraa dhaaba sanaa hin taane nuti maalii qaama biraadhaaf meeshaa taana jettee maqaa unv. saayinsiif teknoolojii Adaamaa balleessite ijoolleen keenya isheerraa akka of eegan jenna. namoota akkasi kanaaf waan gatii isaanii barbaaduun dirqama akka ta’uus hin dagatiinaa!!
Previous Tokkummaa Oromo biyya Sweden
Next Demonstrators arrested, beaten and shot dead